Mudara raTinashe Muchuri: August 2016
Apa ndipo pakazouya nyaya yemabhangi ekuvharwa muZimbabwe. Ipapo vanhu vakatora mari yavo ndokuiisa mubhangi. Bhangi riya chiona zvarakaita. Kugarira mari yavanhu. Kufutsira mari yavanhu kwakutokanganwa nezvazvo. Vanhu nechigumbu ndokuuya ndokutora mari yavo, sarei bhangi harisisina mari. Mufananidzo uyu wakandibata. Zvakangonakawo kuverenga mabhuku nekuti zvinosimudza kubata basa muupenyu.